Nin Yahuudi ah labadiisa gabar uu dhalay oo Muslimaat ah ku taageeraya in ay qaataan xijaabka - iftineducation.com
iftineducation.com – Layaabka caalamka ayaa noqotay kadib markii la arkay aabe Yahuudi ah mulxid ah ah hadane usii dheertahay mabaadiida shuucinimada in labadiisa gabar uu dhalay oo Muslimaat ah ku taageeraya in ay qaataan xijaabka.
Dalka France ayaa hore uga mamnuucay in schoolka aan la soo qaadan karin wax xijaab ah taas oo xad gudub ku ah dadka heesta diinta Islaamka.
Aabahaan oo diin ahaan ka duwan labadiisa gabar ayaa layaab ku noqotay in uu difaaco uu garab istaago sidii labadiisa gabar ee muslimaatka u sii wadan lahaayeen xijaabka.
Gabdhaha uu dhalay aabahaan Yahuudiga ah ayaa lagu kala magacaabaa Leyla iyo Alma, mid kamid ah tv yada dalka France oo wareesi layeelanay ayaa mid kamid ah gabadha waxay sheegtay in aaba yaal badan ay ilmahooda raali oga noqdeen in ay isticmaalaan
mukhaadaraad sidoo kale ay jiraan dumar jirkooda ka ganacsada oo aan aabayaashooda ama waalidiintooda waxba u arkin oo loo ogol yahay balsa waxay layaabtay hadii ay qaadato xijaabka in loo diidayo eena tahay wax caqliga kabaxsan.
Halkaan ka daawo video ga.